Kuyini Ukumelwa Komkhiqizo? Uyihlakulela Kanjani? | Martech Zone
Kuyini Ukumelwa Komkhiqizo? Uyihlakulela Kanjani?
NgoLwesine, ngoMashi 9, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba ngibheka emuva eminyakeni eyishumi edlule yamakhasimende ethu e-ejensi, amakhasimende amaningi afikile futhi ahamba labo esasihlangana nabo ngokungazi ngemizamo yethu yokumaketha engenayo. Kodwa-ke, isisekelo sebhizinisi lethu bekungukukhangisa ngomlomo kusuka kulawo makhasimende esikhiqize imiphumela iminyaka edlule. Eqinisweni, iziphakamiso ezintathu esisebenza kuzo manje zihlobene ngqo namakhasimende wangaphambilini esisebenze nawo.
Akumangalisi ukuthi abameli bomkhiqizo banethonya elingaphezulu ngama-50% esinqumweni sokuthenga kunekhasimende elijwayelekile kanti abathengi abangama-90% babika ukuthi isincomo se-word-of-mouth (WOM) sihola ithonya lesinqumo sabo sokuthenga. Eqinisweni, kuzinqumo ezingama-20 kuya kwezingama-50 zazo zonke izinqumo zokuthenga, iZwi-loMlomo liyithonya eliholayo
Ummeli ushayela imali eyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha zamarandi ukusetshenziswa kwemali yabathengi minyaka yonke
Kuyini Ukumelwa Komkhiqizo?
Kwezokumaketha, a ummeli womkhiqizo ungumuntu, isisebenzi, umgqugquzeli, noma ikhasimende elikhuluma kahle ngomkhiqizo noma ngomkhiqizo, okuholela kumilayezo emihle yezwi ngomlomo (WOM) emayelana nomkhiqizo kunethiwekhi yabo.
Kuyini Ukukhuthaza Amakhasimende?
Ukukhuthaza ukukhuthazwa komkhiqizo, izinhlobo zisebenzisa isiko eligxile kakhulu kumakhasimende, linikezela ngomuzwa ophakeme wamakhasimende. Umphumela we- ukukhuthazwa kwamakhasimende akukhona nje ukwanda kokugcinwa noma inani lamakhasimende elijwayelekile, kuveza imbuyiselo yotshalo-mali njengoba lawo makhasimende eba abameli bomkhiqizo.
Okubi ukuthi, kukhona igebe elikhulu lokukhuthaza lapho amabhizinisi engenzi umsebenzi omuhle wokuhlonza noma wokucela usizo lwabangaba ngabameli bohlobo lomkhiqizo. Ngaphezu kwengxenye yazo zonke izinkampani abazi nokuthi bangobani abameli babo bohlobo. IJitBit ihlanganise le infographic, Izizathu eziyi-15 zokuthi kungani Ukumelwa Komkhiqizo kungumgogodla webhizinisi lakho, Eyabelana ngakho konke ukungena nokuphuma kokumaketha komkhiqizo nokuthuthukisa izinhlelo zakho zokukhuthaza amakhasimende.
Izindlela Zokuhlakulela Ukuqwashiswa Komkhiqizo
Gxila ebuhlotsheni - yini eyenza ikhasimende lithandane nomkhiqizo wakho? Umkhiqizo wekhwalithi, insizakalo yamakhasimende enhle kakhulu, kanye nokuhlangenwe nakho okungaguquguquki.
Khonza ngejubane - lapho uthenga ku-inthanethi, izivakashi ezingama-71% zilindele usizo kungakapheli imizuzu emihlanu. Nikeza usizo lapho amakhasimende akho eludinga.
Yabelana ngempumelelo - khulisa impendulo enhle nempumelelo yabameli bakho bamanje - faka isibuyekezo kuzikhangiso, yabelana ngemiphumela uma kwenzeka ucwaningo, futhi uhlale usho amakhasimende akho.
Amakhasimende omvuzo - nikeza ama-sneak peeks emikhiqizweni / ezinsizakalweni ezintsha, phatha imicimbi ekhethekile yokumema kuphela, thumela okunikezwayo okukhethekile, dala uhlelo lokuthembeka, futhi unikeze nge-VIP service.
Amakhasimende amangazayo - Mangaza amakhasimende athembekile lapho engakulindelanga, futhi azokhuluma ngokumangala, nangomthumeli wawo. Kungaba yinoma yini kusuka kumanothi okubonga kuya ekuvuseleleni kwamahhala.
Nika abameli amandla - Abameli bathanda ukudumisa imikhiqizo yabo abayithandayo. Indlela engcono kakhulu yokudumisa abangayinikeza ukudluliselwa. Ukunikezwa kukhuthaza isisusa sokuthumela ibhizinisi elisha ngendlela yakho.
Khumbula izikhathi ezikhethekile - ukuthumela amakhasimende ikhadi noma isipho ngosuku olukhethekile olufana noKhisimusi noma usuku lwabo lokuzalwa kuyindlela elula yokujulisa ukuxhumana kwabo nomkhiqizo wakho.
Cela futhi uthathe isinyathelo ngempendulo - cela impendulo kumakhasimende, bese wenza ngokuvumelana nayo. Abathengi baba ngabameli uma bezwa sengathi impendulo yabo iyezwakala futhi okufakwayo kuyabaluleka.
Yisho ukubonga, ngisho nakwabahlambalazayo - bona futhi ubonge yonke impendulo, noma engeyinhle. Uma amakhasimende angajabuli ezizwa ehlonishwa, azohlala isikhathi eside.
Futhi ungakhohlwa ukuphuma UJitbit! Uhlelo lwabo lwethikithi lwedeski losizo lufile, lunamandla ngokumangalisayo futhi kuthatha amasekhondi ukusetha.
Tags: ukukhuthazaukumela umkhiqizoummeli womkhiqizoukwakhiwa kwesakhiwoukukhuthazwa kwamakhasimendejitbit
Ukufika Kokumaketha Okugxilile, Ubuntatheli Nezemfundo
Awardzee: Ungayithola Kanjani Imiklomelo Ku-inthanethi